संविधानको दिवसकै दिन काठमाडौँमा के भयो यस्तो ? बीच सडकमै अभियान्ताहरु सामूहकि रुपमा डाको छाडेर रुन थालेपछि…(भिडियोसहित) « गोर्खाली खबर डटकम
संविधानको दिवसकै दिन काठमाडौँमा के भयो यस्तो ? बीच सडकमै अभियान्ताहरु सामूहकि रुपमा डाको छाडेर रुन थालेपछि…(भिडियोसहित)
केही अभियान्ताहरुले विरोधको फरक शैली अपनाएका छन् । संविधान दिवसकै दिन वर्तमान सरकारले संविधानको मर्म र भावनाको हत्या गरेको भन्दै सामूहिक रुपमा रोएर राजधानी लगायत देशका विभिन्न भागमा विरोध प्रदर्शन गरिएको छ ।
राजधानीमा भएको कार्यक्रममा तिमीलाई जन्माउनेले नै मारेर छोडे नी।।।भन्दै डाँको छोडेर प्रदर्शनकारीहरु रोएका थिए ।